Momba anay - Morningstar Stone Co., Ltd.
Vato kintana maraina
Ny hatsaran-tarehy ny vato voajanahary dia mamoaka ny famirapiratany tsy manam-petra sy ny hatsarany.
Amin'ny Morningstar dia homena anao hatrany ny tena sandan'ny vato voajanahary.
Niorina tamin'ireto vato fehizoro miavaka ireto i Morningstar Stone:
Passion ho an'ny indostria vato voajanahary
Ny kalitao no zavatra voalohany tsy azo atahorana
Serivisy ara-potoana sy marina
Ny fanavaozana no motera tsy an-kijanona ho an'ny Morningstar hamiratra hatrany
Avy amin'ny fisafidianana ny akora mankany amin'ny fanodinana marina sy marina, kendrenay ny hampisehoana ny hatsarana tsy manam-paharoa isam-karazana vato voajanahary amin'ny alàlan'ny fiezahana faran'ny ekipa mahomby sy ny fako kely indrindra ara-toekarena sy ara-bika. Ny fahaizan'ny tsirairay avy ny mpiasa ao amin'ny marbra Morningstar dia miray hina ary mamorona orinasa marobe sy feno.
Manomboka amin'ny asa kely indrindra ka hatramin'ny tetikasa be fatra-paniry laza indrindra, i Morningstar dia foto-kevitra hanomezana fahafaham-po ny fiandrasana ara-teknika, hatsaran-tarehy ary toekarena ho an'ny mpanjifa tsirairay izay miantehitra amin'ny asanay matanjaka nefa manavao.
Mandritra izany fotoana izany dia manana fanangonana fanandramana tena tsara ho an'ny tetikasa avo lenta. Vahaolana tokana no takiana amin'ny fizarana mihaja mba hahatratrarana vokatra malaza amin'ny alàlan'ny famoahana hatsaran-tarehy tsy voamarika amin'ny vato, mitaky ekipa mpamorona sy mavitrika manana traikefa betsaka amin'ny tetik'asa marbra sy voajanahary.
Serivisy fijanonana vato tokana